Nepal Dayari | नेपाललाई १० लाख डोज खोप दिने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा
नेपाललाई १० लाख डोज खोप दिने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा
असार ७, २०७८ सोमबार २८८ पटक हेरिएको
दुई राष्ट्रपतिबीचको टेलिफोन संवादपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिएको घोषणा गरेकी हुन् । यसअघि चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएको थियो ।
बुधबार टेलिफोन कुराकानीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपाललाई आवश्यक कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।
बुधबार दुई राष्ट्रपतिबीच करिब ४० मिनेट भएको कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-१९ बाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व रहेको भन्दै आवश्यक खोप चीनबा ६ खरिद गर्न इच्छुक रहेको बताएकी थिइन् । उनले यस प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति सीलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल चीनको अभिन्न मित्र रहेकाले नेपालले मागेको सहयोगबारे आफ्ना सरकारी अधिकारीहरुसँग बुझ्ने बताएका राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिए । ‘यहाँको अनुरोधलाई मैले मनन गरेको छु, हामी नेपाललाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर छौं’ कुराकानीमा क्रममा राष्ट्रपति सीले भनेका थिए ।
कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारले कहाँबाट कति ऋण तथा सहयोग प्राप्त गर्यो ?
देशको स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्तिले धान्न नसक्ने गरी कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ । परिणामस्वरुप संघीय सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोगको आह्वान गरिरहेको छ ।
सरकारको आह्वानअनुसार विभिन्न देशले स्वास्थ्य उपकरण तथा आर्थिक सहयोग गरेका छन् । केही मुलुक तथा दातृ निकायले महामारीसँग जुध्नका लागि नेपाललाई ऋण सहायता उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आह्वानमा विभिन्न मुलुकले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका छन् । चीन, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, बंगलादेश लगायतबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चीन सरकारले २ हजार थान अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गरेको छ भने तिब्बत सरकारबाट १ सय ५० थान लिक्विड अक्सिजन ट्यांक सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको छ । यस्तै, स्पेन सरकारबाट १५ भेन्टिलेटर, १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र १ लाख २४ हजार एन्टिजेन किट लगायतका सामग्री सहयोगस्वरुप सरकारले प्राप्त गरेको छ ।
स्वीटजरल्याण्डबाट ११ लाख एन्टिजेन किट, ४० भेन्टिलेटर र १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशबाट १० हजार रेम्डिसिभिर औषधि, सिंगापुरबाट २० भेन्टिलेटर, १ लाख २४ हजार पीसीआर किट लगायतका सामग्री प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, अमेरिकाबाट ५ लाख एन्टिजेन, पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकाबाट थप स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वीटजरल्याण्डबाट ९७ करोड, अमेरिकाबाट ४३ करोड, सिंगापुरस्थित सामाजिक संस्थाबाट २३ करोड, स्पेनबाट १२ करोड, चीन सरकारबाट ७ करोड, बंगलादेशबाट ४ करोड र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाबाट जम्मा १३ करोड गरी करिब २ अर्ब रकम बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री सहयोग प्राप्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक सहायता कहाँबाट कति ?
कोभिड—१९ महामारी व्यवस्थापनका लागि हालसम्म आर्थिक सहायता अन्तर्गत जर्मन सरकारको ‘केएफडब्ल्यु’ मार्फत १ अर्ब ४२ करोड, एशियाली विकास बैंकबाट ३६ करोड तथा विश्व बैंकबाट करिब २४ करोड सहायता रकम प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान सरकारले ३ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
योसँगै जम्मा ५ अर्ब २२ करोड सहायता रकम नेपालले प्राप्त गरेको छ । नेपालमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर घातक बन्दै गएपछि महामारीसँग जुध्नका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न दातृनिकाय तथा बैंकहरुसँग ऋण सहायता समेत लिएको छ ।
ऋण सहायता अन्तर्गत कोभिड—१९ को प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको र कोभिड—१९ खोप व्यवस्थापनका लागि थप ९ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड—१९ खोप व्यवस्थापनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट पनि १९ अर्ब ८० करोड ऋण सहायता लिने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । महामारीसँग जुध्नका लागि हालसम्म जम्मा ३२ अर्ब २८ करोड ऋण सहायता परिचालन भएको उनको भनाइ छ । संचारकेन्द्र डटकम बाट